Maleeshiyo beeleed la wareegay degmada Marko – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Marko – Mareeg.com: Wararka ka imaanaya degmada Marko ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in xalay saqdii dhexe uu halkaas ka dhacay dagaal xoog leh oo u dhaxeeya labo maleeshiyo beeleed oo maalmahaan ku dagaallamayey deegaano ka tirsan Shabeellaha Hoose.
Mid ka mid ah labada beelood ee isku hayey Shabeellaha Hoose ayaa xalay saqdii dhexe weerar ku qaaday degmada Marko, halkaasoo ay joogeen maleeshiyo beeleed ka amar qaata gudoomiyaha degmada Marko, Maxamed Yariisow.
Dagaal qaatay saacado oo halkaas ka dhacay ayaa ugu dambeyntii maleeshiyaadkii weeraray Marko la wareegeen magaalada, sida ay sheegayaan wararka laga helayo halkaas.
Warar horudhac ah oo soo baxay ayaa sheegaya in dagaalkii xalay ay ku dhinteen ku dhawaad 8 ruux oo labada dhinac ah.
Lama oga sida xaalku ku dambeyn doono, hase ahaatee waxaa wararka ka imaanaya Marko sheegayaan in meelaha qaar laga maqlayo rasaas goosgoos ah.
Dhawaanahan waxaa dagaallo ka dhacayeen deegaanka Ceel Wareegow oo saaran wadada laamiga ee isku xirta Afgooye iyo Shalaambood, sidoo kale waxaa maleeshiyo weerar ku qaadday guriga gudoomiyaha deegaanka Shalambood, Nuur Cusmaan Raage oo kazoo jeeda beesha xalay weerartay Marko, waxaana halkaas lagu dilay gabar oo uu dhalay iyo dad kale.
Maalmihii lasoo dhaafay ayaa labada beelood ee ku dagaallamaya Shabeellaha Hoose wadeen hub uruursi, waxaana arrintu sii xumaatay markii la weeraray beero iyo guriga gudoomiyaha deegaanka Shalaambood.
Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose C/qaadir Maxamed Nuur Siidii oo aan kazoo jeedin labada beelood ee dagaallamaya ayaa shalay dowladda Soomaaliya iyo AMISOM ugu baaqay iney faragelin deg deg ah ku sameeyaan dagaalka Shabeellaha Hoose.
Ilaa hadda lama hayo dowrka dowladda Soomaaliya iyo ciidamada AMISOM oo saldhigyo badan ku leh gobolka Shabeellaha Hoose oo magaalada Marko ee xalay maleeshiyo beeleedku la wareegeen ay ka mid tahay.
Dowladda Soomaaliya ayaa u muuqata mid fashilantay maadaama maleeshiyo beeleed dib ula wareegayaan dhulkii ciidamada AMISOM ka saareen ururuka Alshabaab.